Install BitTorrent Client Deluge 1.3.15 Amin'ny Ubuntu 17.04
Nafahana ny client BitTorrent Deluge 1.3.15. Ampidino ny client BitTorrent Deluge amin'ny Ubuntu 17.04 sy ny dingana Ubuntu hafa. Deluge 1.3.15 dia famotsorana famaha ny famaha olana izay mamaha olana vitsivitsy voapetraka ao 1.3.14 miaraka amin'ny fikajiana kely hafa. Ny Deluge dia kisary BitTorrent mpizarazara tanteraka. ...
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu 2.2.5 ny mpilalao media VLC 17.04
Navoaka ny mpilalao media VLC 2.2.5. Ity ny fomba fametrahana VLC 2.2.5 ao Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 ary ny hafa Ubuntu Systems. Ny mpilalao media VLC 2.2.5 dia mitondra fiarovana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana DLL. Decoder: * Hamafiso ny fihenan'ny qualifier playback mp3 amin'ny libmad * Fix ...
Opera 45 no navela - Install Opera Web Browser ao amin'ny Linux Ubuntu 17.04
Navoaka ny Opera 45. Apetraho ny tranonkala tranonkala Opera amin'ny Linux Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04 ary Ubuntu 14.04 Systems. Opera 45 dia nomena anarana hoe Opera Reborn. Tamin'ny famoahana ny Opera teo aloha, dia nampidirina ny VPN maimaim-poana sy ny fanakanana ny adiresy. Tany am-piandohan'ity taona ity dia nampidiriny ihany koa izy ireo
Ahoana ny fametrahana VLC 2.2.5 amin'ny Ubuntu 16.04, 14.04
Navoaka vao haingana ny mpilalao media VLC 2.2.5 tamin'ny fanatsarana maro. Ity ny fomba hametrahana azy ao Ubuntu 14.04, sy Ubuntu 16.04. Efa ho herintaona izay no namoahana ny VLC 2.2.4 farany tamin'ny 2016 tamin'ny Jona. VLC 2.2.5 misy endri-tsoratra: Famaritana maitso maitso ...
Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus) azo alaina
Navoaka i Ubuntu 17.04. Ny dikan-teny vaovao dia mitondra fampiharana misimisy sy fanatsarana maro samihafa, miaraka amin'ny fanamafisam-peo. Araka ny efa nampoizina, ny Compiz sy ny Unity dia nahazo fanatsarana kely fotsiny sy ny famahana ny olana. Etsy andaniny, Ubuntu 17.04 dia ahitana ny stack GNOME 3.24 ho an'ny ankamaroan'ny ...
Pandora Radio Klioba Pithos 1.3.0 nalefa, azo amidy ao amin'ny PPA
Navoaka vao haingana i Pithos 1.3.0 ary azo alaina ao amin'ny PPA ofisialiny, ho an'ny Ubuntu 17.04, 16.10 ary 16.04. Ny dikan-teny vaovao dia mitondra fanohanana ny playlist MPRIS sy ny lisitry ny tracklist, ny fampitomboana ny fidirana UI, ary bebe kokoa. Pithos dia Radio Pandora (afa-tsy ao Australia, Nouvelle Zélande ...
Endrika vaovao vaovao vaovao Connect Ubuntu / Linux Mint PPA
Ny endriky ny mpampiasa KDE Connect (gorodona) dia tsy misy intsony ny PPA, ary nangatahana aho hamorona PPA vaovao. Koa satria mpampiasa mpampiasa mpampiasa azy aho dia tsy afaka niteny hoe tsia, noho izany dia namorona torolàlana iray ho an'ny KDE Connect PPA aho, izay manome fonosana ho an'ny ...
Fametrahana ny Google TensorFlow Neural Network Software ho an'ny CPU sy GPU amin'ny Ubuntu 16.04
Ny fametrahana ny Software TensorFlow Neural Network an'ny Google sy CPU amin'ny Ubuntu 16.04 TensorFlow dia rindrambaiko malalaka ahafahana manatanteraka asa fianarana amin'ny fametrahana machine. Google, ny mpamorona azy dia naniry hamoaka fitaovana matanjaka hanampiana ireo mpikaroka hikaroka sy hanamboatra fitaovana fampiasa amin'ny finday ary noho izany dia ...
Ahoana ny fametrahana Cinnamon 3.4 ao Ubuntu 16.04, 17.04
Ny tontolo Desktop Cinnamon dia tonga tamin'ny famoahana vaovao 3.4 vaovao andro vitsy lasa izay. Na dia tsy misy fanambarana ofisialy navoaka tao amin'ny Linux Linux tamin'ny fotoana nanoratana azy, dia azonao atao izao ny mametraka izany ao amin'ny Ubuntu 16.04, Ubuntu 17.04 amin'ny PPA. Cinnamon 3.4.0 mitondra ny 160 ...
Mandehana Mandrakariva - Lisitra Atao Ho an'ny Linux Ubuntu
Mitady ny lisitra tsara indrindra ho an'ny Linux Ubuntu? Mametraka izany ho azy, lisitra maoderina an-tserasera miaraka amin'ny timer, ho an'i Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04 ary Ubuntu 14.04 ary ny hafa avy amin'ny Ubuntu. Ataovy! dia fampiharana vokatra tsotra sy marevaka, manasongadina ...
Install FFmpeg 3.3 Ao amin'ny Ubuntu 17.04 Via PPA
Ahoana ny fametrahana FFmpeg 3.3 ao Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04 ary ny dingan'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny PPA ao Ubuntu. FFmpeg 3.3 "Hilbert", famoahana vaovao lehibe, azo jerena! Ny sasany amin'ireo lohahevitra: Apple Decoder decoder NewTek SpeedHQ decoder QDMC audio decoder PSD (Photoshop Document) decoder FM ...
Ny famoahana Point GNOME 3.24 Point vao tonga tany Ubuntu 17.04
GNOME 3.24.1 dia omena ho an'ireo mpampiasa ny Ubuntu 17.04. Io no famoahana voalohany ny tontolon'ny biraon'ny GNOME satria hatramin'ny famoahana ny GNOME 3.24 amin'ny martsa. GNOME 3.24.1 dia manamboatra fiovàna kely maromaro amin'ny ambaratonga fototra ...
Ahoana ny fametrahana Kubuntu 17.04
Ity toro-làlana ity dia mitarika anao hametraka ny rafitra fandidiana Kubuntu 17.04 dingana isan-kerinandro. Hanomana fizarazarana lehibe ianao, fizaràna fiasa, ary manao dingana fametrahana amin'ny fampiasana USB mitondra bootable. Afaka mipetraka eo amin'ny PC sy ny solosaina ny Kubuntu, ary azo ampiharina amin'ny lesona io lesona io. Mora sy ...
Ahoana ny fametrahana Ubuntu Budgie 17.04
Ity dia torolalana tsotra hametrahana an'i Ubuntu Budgie 17.04. Satria i Ubuntu Budgie dia vaovao vaovao amin'ny fianakavian'i Ubuntu, mino izahay fa mila lesona maro ny mpandidy. Izany dia hanazava ny fametrahana ny solosaina amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny fanomanana fisakafoanana tsy tapaka mba hahatonga azy ho azo antoka kokoa.
Miangavy anao hiarahaba Xubuntu 17.04, GNU / Linux OS vao navoaka vao haingana miaraka amin'ny fampiasana ambany fahatsiarovan-tena ary interface interface tsara tarehy. Miara-miasa amin'ny XFCE 4.12, Firefox 52, ary LibreOffice 5.3. Mihena fotsiny ny 330MB RAM amin'ny fotoana tsy misy ilana azy, tena mora amin'ny ordinatera ambany sy efa taloha. ...
Ity dia famerenana ny Ubuntu 17.04 Zesty Zapus miaraka amin'ny tontolon'ny biraon'ny Unity 7 sy 8. Ity famoahana ity dia tsara tarehy toy ny mahazatra, vonona amin'ny fampiasana zava-mahadomelina, ary feno tanteraka amin'ireo fonosana 70000 amin'ny tranokala ofisialy. Hanohana azy amin'ny volana 9 hatramin'ny volana janoary izy io.
Download Ubuntu 17.04 miaraka amin'i Zsync, Fandefasam-peo amin'ny Bandwidth
zsync dia afaka mampihena be ny tontolonao maimaim-poana izay mety ho an'ny fandefasana sary goavana ISO. Ho an'ny fampahalalanao, Ubuntu dia manome ny .zsync rakitra ho an'ny sary ISO rehetra. Azonao ampiasaina ny console zsync mba hahazoana ny famoahana 17.04 tsy hiantefa ny 1.5GB manontolo. Manoratra aho …
Ny Kubuntu 17.04 dia navoaka tamin'ny 13 2017 tamin'ny volana Aprily. Ity fanadihadihana ity dia mampahafantatra ny lafiny sasany amin'ny Kubuntu avy amin'ny endrika ivelany, ny fampiasana ny tranonkala, ny rindrambaiko sy ny fanalahidy. Mahagaga fa mora kokoa amin'ny fampiasana fahatsiarovan-tena noho ny Ubuntu Unity, miaraka amin'ny endrika tsara tarehy sy Windows, miaraka amin'ny fangatahana tanteraka. Ity ...
Tongasoa Ubuntu Budgie 17.04: Famerenana fohy
Ubuntu Budgie dia manomboka ny laharana voalohany ho an'ny fianakaviana Ubuntu ao amin'ny 17.04 "Zesty Zapus". Safidy vaovao nofinofy amin'ny tontolo iainana (Budgie) vaovao ho rafitra fiasa ho antsika. Ny Ubuntu Budgie dia noforonina ho ampiasain'ny Desktop, tsy misy tablette mitovy (toy ny Unity na GNOME), misaotra ...
Ahoana ny fametrahana Ubuntu 17.04 Zesty Zapus
Ity lesona ity dia mampiseho ny fomba fametrahana ny Ubuntu 17.04 Desktop amin'ny dingana isan-kerinandro. Ity lesona fampianarana ity dia natao ho an'ny mpampiasa vaovao miaraka amin'ny dikan-drakitra isaky ny dingana ka ho tsotra sy haingana. Ny minitra ihany dia mila minitra 10. Ho an'ireo mpampiasa vaovao, iriko ity torolàlana ity ...
04 Linux Ubuntu Systems iPhone Microsoft Windows taona Microsoft famotsorana GNOME Apple Watch Server takelaka fikirakirana Windows 8 HTTP Chrome Time Unité centrale Samsung Windows vaovao farany rafitra Support SEO HTML Company Linux Mint USB Linux OS X YouTube "PC ubuntu 15.04 bilaogy Users Command app store MySQL Apache fitaovana finday Malagasy Bible One ' Ubuntu 14.04 windows update SSH HTTPS fitaovana Debian endri-javatra fanamarinana Google fitaovana famerenana PPA Windows Phone Ubuntu 14.10 Fitaovana finday Apps IP adiresy PDG File PHP 'App Ubuntu 16 WordPress Phone rindrambaiko Windows 10 10 Unix Screen Cortana Video Twitter Plugin raki-daza loharano misokatra lalao Bing SSD command line nbsp Android hametraka finday avo lenta Facebook bilaogy Samsung Galaxy Database web server Nginx Firefox fikarohana Toetoetra CentOS Ubuntu (rafitra fandidiana) fifamoivoizana Plugins Ubuntu fitaovana toe-tsaina MAMAKA ram Up " afa-po tahirin-kevitra CentOS 7 paoma haino aman-jery sosialy Rafitra fikirakirana API lalao web browser